I "Maphakathi" - A Self-Ukulinganisela Scooter ukuthatha kuyo - Jomo Technology Co., Ltd
I "Maphakathi" - A Self-Ukulinganisela Scooter ukuthatha kuyo
Lokhu Koowheel Electric self ngokulingene isikuta E1 ungukukhanya kodwa lisebenza, patent Innovative imfashini design cool, ukubonisa LED isikrini ngokuphelele ukukhombisa ibhethri nesivinini, super ukushaqeka zokuncishiswa iraba 8inch ithayi elimpontshwayo. Ngaphandle kwalokho, eligoqiwe futhi baphathe kalula. Nokho, anganikeza amandla afanayo nokuzinza njengoba itholakala nge nezimfashini ephezulu sekugcineni. Stem Extendable, kuhle kokubili izingane kanye nabantu abadala.
Ngaphezu kwalokho, omunye engcono skateboard kagesi empeleni okugqugquzelwa nge izimali ezidingekayo ngakho-ke kungenzeka ukusebenzisa ingubo okusheshayo abahlukanisayo eside futhi kumelwe afanelekele ugibele phezu nasemithambekeni kakhulu. Ijubane behamba nganoma kuyahlukahluka, Nokho kungaba ukufinyelela max isivinini 42 km ngehora.
Uma udinga ukuthenga isikuta kagesi ukusetshenziswa ngakunye, lokhu E1 kungaba ukonga ngempela futhi nakho okuwusizo wena nanoma ubani e obathandayo. Kungakhathaliseki ukuthi kuningi ukukhokha, kungcono cishe engacabangeki ukuhlangabezana onjani umlilo ingozi lurks (noma akusho Sihlala) ngaphakathi kwanoma iyiphi isithuthuthu. Ngakho-ke, ngaphansi imvula enkulu, kuwukuhlakanipha nje ukungcebeleka, bese ugcine kude amaxhaphozi. Nokho uma kuqhathaniswa ibhodi ngomfutho, i-E1 has a emnandi ngempela kuwufanele umaka izakhi ke sika - lutho extra, hhayi okungaphansi. Amabhayisikili asetshenziswa hhayi nje ngenjongo yokuzijabulisa Nokho ngoba beya - emsebenzini, kuze kube umthengisi zokudla, yini wake. Mina phumela eceleni futhi ube nesikhathi ongeke amangalisayo cishe-kwelanga isikeyiti. Eyokuqala siphela nge ijubane iningi 16mph, kanti sakamuva singabangela bakhuphukele 22kmh. Ungase ube i nomqondo imikhawulo ijubane Harley kancane.
isikhathi Iposi: Apr-20-2018